हिमाल खबरपत्रिका | बनाउँदै थन्क्याउँदै
विज्ञान–प्रविधि क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने प्राज्ञिक संस्था नास्टले भित्र्याएका÷विकास गरेका प्रविधिको व्यावसायिक प्रयोग हुनसकेको छैन।
नास्टले स्थापना गरेको जैविक इन्धन नमूना उद्योग । यसले प्रतिदिन १०० लिटर इन्धन उत्पादन गर्न सक्छ ।
प्लास्टिक फोहोरको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भइरहेको बेला नास्टले कम लागतमै प्लास्टिकबाट पेट्रोलियम बनाउने प्रविधि नेपाल भिœयाएको हो । तर, नास्टका यस्ता धेरै प्रविधिको व्यावसायिक प्रयोग हुन नसक्दा आमरूपमा लाभ हुनसकेको छैन ।
सात वर्षअघि ढकाल नास्टमा आउँदा बायोडिजल (जैविक इन्धन) उत्पादन गरेर २० वर्षपछि नेपाललाई तेल निर्यात गर्ने राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्ने सपना साँचेका थिए । तर, बायोडिजलको अनुसन्धानमा गरिएको लगानीले त उपलब्धि दिने संकेतसम्म देखिएको छैन । उनले भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) तथ्यांक विश्लेषण गर्दा देशभर १९ लाख हेक्टर जमीन खेर गइरहेको देखेका थिए । त्यस्ता बाँझे जमीनमा सजिवन खेती गरेर प्रतिहेक्टर औसत १५०० किलो कच्चा तेल उत्पादन गर्न सकिने ढकालको परिकल्पना थियो ।
अहिले मात्र होइन, नास्टका पुराना प्रविधिहरूको पनि बजारमा व्यावसायिक उपयोग भएन । २०४४ सालमै नास्टले ‘बहानाबक्र’ भन्ने मेशीन बनाएको थियो । इन्धन विना नै खोलाको पानी तान्ने र बिजुली पनि निकाल्ने यस्तो मेशीन धादिङको घाटबेसीमा परीक्षण गरिएको थियो । दाङको अम्मापुरमा त्यसै वर्ष सौर्य ऊर्जा मार्फत खोलाको पानी माथि तान्ने प्रविधि परीक्षण गरियो । त्यही वर्ष इन्धन विना चल्ने डुंगा बनाएर घाटबेसीमै परीक्षण गरियो । त्यसको कार्यक्षमता बढाउँदै थप अनुसन्धान गर्ने कार्यक्रम पञ्चायतको बहिर्गमनसँगै हरायो । “त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्न सकेको भए अहिले जस्तो तुइनको समस्या आउँदैनथ्यो” नास्टको प्रविधि संकायका पूर्वप्रमुख डा. सुरेशकुमार ढुंगेल भन्छन् ।
ढुंगेलकै नेतृत्वमा तीन वर्षअघि नास्टले ‘सोलार प्यानल क्लिनर’ बनायो । सडक बत्तीहरूमा जडान गरिएको सोलार प्यानलमा जम्मा हुने धूलो सफा गर्ने त्यस्तो मेशीनमा नास्टले पेटेण्ट दर्ता गर्न उद्योग विभागमा पठाएको छ । “२०४२/४३ सालमा काठमाडौंका सबैजसो मूल सडकमा ट्राफिक लाइट भए पनि सोलार प्यानल सफा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना अभावले लामो समय चल्न सकेन” ढुंगेल भन्छन्, “अहिलेका सडकबत्तीको पनि त्यही अवस्था नहोस् भनेर यस्तो मेशीन बनाएका हौं ।” यो मेशीन भने अनुसन्धानमा सहभागी एक वैज्ञानिकले नै व्यावसायिक उत्पादन गर्ने योजना बनाएर कम्पनी दर्ता गरेका छन् । “ठूलै व्यवसायीहरू पनि यसमा लगानी गर्न तयार भएका छन्”, उनी भन्छन् ।
तर उनै ढुंगेलले हाल बजारमा पाइने ‘सिलिकन सोलार’ भन्दा निकै सस्तो मूल्यमा नेपालीलाई सौर्य ऊर्जा प्रदान गर्न भन्दै ‘डाई–सेन्सिटाइज्ड’ प्रविधिको सोलार प्यानल बनाउने अनुसन्धान गरे । अप्रत्यक्ष प्रकाशमा समेत ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने यो सस्तो प्रविधिले आम नेपालीलाई सौर्य ऊर्जाको पहुँचमा ल्याउने सपना देखेर नास्टले शुरूमै रु.१० लाख खर्च गर्‍यो । पछि रु.१ करोडभन्दा महँगो मेशीन पनि किन्यो । नेपालमै पाइने वनस्पतिका जैविक रङ प्रयोग गरेर यस्तो सोलार प्यानल बनाउने उनको योजना त्यसबेला ‘फेल’ खायो, जतिबेला यस्तो सोलार प्यानलमा प्रयोग हुने तरल रसायन ‘इलेक्ट्रोलाइट’ को तापमानलाई व्यवस्थित गर्न संसारभरको अनुसन्धान सफल हुन सकेन । अहिले त्यो मेशीनको प्रयोग चाहिं विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले गरिरहेका छन् । बरु नेपाल भित्रिने सौर्य प्यानलको गुणस्तर परीक्षण गर्ने ‘सन सिमुलेटर’ प्रणालीले भने राम्रो परिणाम दिएको छ ।
हुन पनि ‘विज्ञान र प्रविधिको प्रवद्र्धन गरेर राष्ट्रिय विकासमा योगदान गर्ने’ भन्दै स्थापना गरिएको प्राज्ञिक संस्थाको ३५ वर्षको प्रगति उल्लेखनीय नभएको स्वयम् नास्टका प्राज्ञहरू नै स्वीकार्छन् । तर, त्यसो हुनुमा नास्टको नभएर सरकारकै कमजोरी देख्छन्, नास्टका पूर्व उपकुलपति दिनेश भुजु । उनका अनुसार २० मंसीर २०३९ मा स्थापना भएयता नास्टले सरकारबाट रु.३ अर्बभन्दा कम बजेट पाएको छ । “३५ वर्षमा नास्टलाई दिएको बजेट र यो एक आर्थिक वर्ष खेलकुदका लागि छुट्याएको बजेट बराबर छ” उनी भन्छन्, “यस्तो स्थितिमा नास्टबाट बढी अपेक्षा के गर्ने ?” उनकै भनाइसँग जोड्दै नास्टका प्रविधि संकाय प्रमुख डा. ढकाल थप्छन्, “यति ठूलो लगानी गर्दा पनि विश्व फूटबल वरियतामा नेपाल १६१औं स्थानमा छ भने विज्ञान, प्रविधिको वरियतामा १०९औं स्थानमा ।”
नास्टले ‘बायोचार’ भनिने अँगार (गोल)को मल बनाउने प्रविधि अहिले किसानको घरघरसम्म पुर्‍याइरहेको छ । हालसम्म १५०० जनालाई बायोचार बनाउने तालिम दिएको नास्टले जनाएको छ । उद्योगले प्रविधि किन्ने वातावरण नबनेपछि किसानलाई प्रविधिक सीप हस्तान्तरण गर्दै जान खोजिएको छ । एशियाली विकास ब्यांकले रु.५ करोड अनुदान दिएपछि कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र कृषि मन्त्रालयलाई समेत लिएर नास्टले देशभर २४४ स्थानमा २२ वटा बालीमा बायोचारको परीक्षण गरेको थियो ।
वैज्ञानिकहरुले कुनै नयाँ प्रविधि तयार पारेको छ भने त्यसलाई प्रचारमा ल्याउनुपर्छ । विदेशतिर नयाँ प्रविधि तयार गरेपछि सार्वजनिक सूचना मार्फत आफ्नो प्रविधि खरीद गर्न बोलपत्र माग्ने प्रचलन छ । नास्टले पनि व्यावसायिक उपयोगका लागि संभाव्य प्रविधि बनाएको छ भने सार्वजनिक सूचना मार्फत आशयपत्र माग्न सक्छ । त्यसपछि निजी कम्पनीहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार ती प्रविधि खरीद गर्न सक्छन् । अन्यथा, कुन संस्थाले के काम गरेको छ भन्ने कसैलाई पनि जानकारी हुन्न ।
दुई वर्षअघि ‘पारासिटामोल बनाउने सस्तो प्रविधि तयार पारेका छौं’ भन्नुभयो । मैले ‘ल्याउनुस्, हामी प्रयोग गर्छौं’ भनें । पारासिटामोल बनाउने प्रविधि अघिल्लै पुस्तामा बनेको हो । तर साँच्चै नयाँ, उपयोगी र प्रतिस्पर्धी प्रविधि छ भने प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर मागेको हो । त्यसपछि नास्टका पदाधिकारीले कुनै कुरा गरेनन् । पुरानै प्रविधि हो भने त त्यसै पनि बजारमा किन्न पाइन्छ । प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र संभाव्यता नभएको प्रविधिलाई हामीले किन्न सक्दैनौं किनकि चीन र भारतका ठूल्ठूला कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ ।